विभूषणमा वेथिति निर्तागत तक्मा - Parichaya.com
By परिचय	 On ९ आश्विन २०७८, शनिबार १५:५५ 0
संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान दिने र सेवा पु¥याउनेलाई सरकारले विभूषित गर्ने परिपाटी छ । सरकारले मान, पदवी, विभूषण, तक्मा दिन पाउनुपर्छ । जसले गर्दा तक्मा पाउनेको उर्जा, उत्साह र उमङ्ग जरुर बढ्छ । यद्यपि त्यसको मर्यादा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा कमजोरी देखिँदा विरोध भयो, सम्मान ओजिलो र गर्विलो बन्न सकेन । सम्मान गर्नेहरू स्वयम् सम्मानित हुन नसक्दा आलोचनाको अपमान खेप्नु प¥यो । राज्यको ढिकुटीबाट २० करोड खर्चेर ९ सय ३ जना व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्दा कोरोना कहरले हातमुख जोर्न कठिन भएर आत्महत्या गर्नेको ग्राफलाई गिज्याएको छ ।
दर्जन बढी विवेकी सज्जनले पदक अस्वीकार गरेर आफ्नो व्यक्तित्वलाई चम्क्याएका छन् । यसले गहन सन्देश पनि दिएको छ । घुमिल छवि भएका व्यक्तिले तक्मा थाप्दा सदाचारका हिमायतीले विभूषण वहिष्कार गरे, यसो गर्नु सरकारलाई प्रश्न गर्नु पनि हो । के विभूषण र तक्माले बुद्धिमा बिर्को लाउने दुष्साहस गरिएको हो ?
दर्जन बढी विवेकी सज्जनले पदक अस्वीकार गरेर आफ्नो व्यक्तित्वलाई चम्क्याएका छन् । यसले गहन सन्देश पनि दिएको छ । घुमिल छवि भएका व्यक्तिले तक्मा थाप्दा सदाचारका हिमायतीले विभूषण वहिष्कार गरे, यसो गर्नु सरकारलाई प्रश्न गर्नु पनि हो । के विभूषण र तक्माले बुद्धिमा बिर्को लाउने दुष्साहस गरिएको हो ? आउँदो चुनावलाई लक्षित गरि विना योगदानका आसेपासे र नातागोतालाई तक्मा बाँडेर तमासा देखाउनु लाजको पसारो हो । तक्मा धारण गर्नेको योग्यता र क्षमताकोे सार्वजनिक साथै पारदर्शी प्रक्रियामा खुल्ला बहस हुनुपर्छ । पदक पाउने पात्रहरू मजाकका विषय बन्नु हुँदैन् । खिसिटिउरी गर्ने माहोल हुुँदा पदकको गरिमा र गौरव नै घटेको छ ।
हिजो राजतन्त्रमा दरबारका सामन्तहरूले हुकुम प्रमाङ्गीका भरमा पदक पाए जस्तै आजको अवस्था पनि त्यस्तै छ । लोभीपापीको जमातबाट तक्मालाई बचाउनु पर्छ । राज्य ऋणको भार जनताको थाप्लामा राखेर नवसामान्तले छातीमा तक्मा लगाउँदा देशको सान उँचो हुँदैन् ।
विभूषणका वास्तविक हकदारको पहिचान हुन नसक्दा गलत प्रक्रिया र सोचले निरन्तरता पाइरहेको छ । निजामति सेवा पुरस्कार सिंहदरबार केन्द्रित हुँदा मोसफलमा सेवा गरेकाहरू अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । यसले संघीय लोकतान्त्र र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै औँलो ठड्याएको छ । हिजो राजतन्त्रमा दरबारका सामन्तहरूले हुकुम प्रमाङ्गीका भरमा पदक पाए जस्तै आजको अवस्था पनि त्यस्तै छ । लोभीपापीको जमातबाट तक्मालाई बचाउनु पर्छ । राज्य ऋणको भार जनताको थाप्लामा राखेर नवसामान्तले छातीमा तक्मा लगाउँदा देशको सान उँचो हुँदैन् ।
तक्माको तमासालाई पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गर्दै भने ‘पदकका आँखा हुन्थे भने कति रुन्थे होलान ।’ विभूषितको सूचीमा परेकाहरू कालोसूचीमा पनि भेटिए । दलका कार्यकर्ता र नातागोताको हाली मुहाली देखियो । योगदानको आधारमा पदक पाएकाहरूको पनि मान र सान चाहेजस्तो रहेन । पदक नै अपमानित भएको छ ।
विभूषित व्यक्तित्वलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा दिइरहँदा आलोचनात्मक प्रतिक्रिया पनि आए । तक्माको तमासालाई पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गर्दै भने ‘पदकका आँखा हुन्थे भने कति रुन्थे होलान ।’ विभूषितको सूचीमा परेकाहरू कालोसूचीमा पनि भेटिए । दलका कार्यकर्ता र नातागोताको हाली मुहाली देखियो । योगदानको आधारमा पदक पाएकाहरूको पनि मान र सान चाहेजस्तो रहेन । पदक नै अपमानित भएको छ । सिंहदरबारमा विगतदेखि अहिलेसम्मका बोराकाबोरा पदकहरू खिया लाएर थन्किएका छन् ।
किसानलाई रुवाउने हुमनाथ कोइरालाले प्रबल जनसेवाश्री पदक पाए । आइजिपी शैलेन्द्र खनालले आफ्नै श्रीमती सरिता कडेँल खनाललाई प्रबल जनसेवाश्री पदक सिफारिश गर्दा उनको योगदान के हो भन्ने कुरा प्रहरी अधिकृतहरूलाई समेत थाहा छैन् । सशस्त्र प्रहरीको कारवाही र घटुवामा परेका डिएसपी शेरबहादुर अधिकारी आइजिपीको कोटामा परेर पदक पाउनु सदाचार प्रहरी अधिकृतको अपमान हो । बौद्धिक चोरीका आरोपित त्रिविका पूर्व भिसी प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ, जन्ममिति नै कीर्ते बनाएका पूर्व प्रधानन्यायशीश गोपाल पराजुली, भ्रष्टाचारको मुद्धा किनारा नलागेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत जस्ताले पदकमा कब्जा जमाएको दृष्टान्त पूरानो भएको छैन् ।
फसल उब्जाउने किसानले मल पाएका छैनन् । गुलियो उत्पादन गर्ने ऊखु किसानका आँखामा नुनिला आँसु छन्, ऊखु बेचेको बक्यौता रकम पाएका छैनन् । किसानलाई रुवाउने हुमनाथ कोइरालाले प्रबल जनसेवाश्री पदक पाए । आइजिपी शैलेन्द्र खनालले आफ्नै श्रीमती सरिता कडेँल खनाललाई प्रबल जनसेवाश्री पदक सिफारिश गर्दा उनको योगदान के हो भन्ने कुरा प्रहरी अधिकृतहरूलाई समेत थाहा छैन् । सशस्त्र प्रहरीको कारवाही र घटुवामा परेका डिएसपी शेरबहादुर अधिकारी आइजिपीको कोटामा परेर पदक पाउनु सदाचार प्रहरी अधिकृतको अपमान हो । बौद्धिक चोरीका आरोपित त्रिविका पूर्व भिसी प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ, जन्ममिति नै कीर्ते बनाएका पूर्व प्रधानन्यायशीश गोपाल पराजुली, भ्रष्टाचारको मुद्धा किनारा नलागेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत जस्ताले पदकमा कब्जा जमाएको दृष्टान्त पूरानो भएको छैन् ।
न्यायमूर्ति र सञ्चारकर्मीले पनि पदक पाए । जसले गम्भीर प्रश्न उठान भएको छ । आफ्ना हितका लागि शासकहरूले कसरी पदक मार्फत् डाम्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । शताब्दी लामो पदक वितरणको परम्परामा राणा, पञ्चायत र गणतान्त्रिक सरकारमा केही भिन्नता छैन् । मूल्याङ्कनको आधारमा त्रुटी हुँदा नै प्रणालीमा धक्का लाग्छ । पदक किन दिइएको हो भन्ने कुराको वस्तुगत तथ्य नभेटिदा पहुँच र प्रभावको भर परेको स्पष्ट हुन्छ । गणतन्त्रमा पनि राजाको हुकुममा पदक बाँडे जस्तो वेथिति कायम नै छ ।
तजविजी शैलीमा पदक वितरण गर्दा पदक नै खोटो सिक्का जस्तो सावित भयो । कुन योगदानको देन रहेर पदक दिइएको हो भन्ने पदक पाउनेलाई नै ज्ञात छैन् । सिफारिश भएछ अनि थापियो भन्ने मात्रै उत्तर छ । होलसेलमा पदक ल्याएर हुलमुलमा बाँडिएको छ ।
इमानजमान, विवेक र न्यायमा गिरावट आउँदा पदक पाउनेहरूको हैषियत उचो देखिए पनि कस्ताले पदक पाए ? भन्ने प्रश्नले समग्रमा नेपाली समाजको चरित्र झल्किएको छ । निजामति दिवसमा उत्कृष्ट कर्मचारीको खडेरी रहँदा पदकमा कर्मचारीको वर्चस्व रह्यो । कर्मचारीको ‘सर्भिस डेलिभरी’बाट नागरिक सन्तुष्ट छैनन् तर पदक उनैले पाएका छन् । वैतनिकलाई नै पदकको ओइरो लागेपछि, समाजसेवामा समय विताएकाहरूको अवस्था नाजुक छ । तजविजी शैलीमा पदक वितरण गर्दा पदक नै खोटो सिक्का जस्तो सावित भयो । कुन योगदानको देन रहेर पदक दिइएको हो भन्ने पदक पाउनेलाई नै ज्ञात छैन् । सिफारिश भएछ अनि थापियो भन्ने मात्रै उत्तर छ । होलसेलमा पदक ल्याएर हुलमुलमा बाँडिएको छ । राज्यकोषलाई नोक्सान हुने गरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र कर्मचारी रिझाउन अंशबन्डाको शैलीमा पदक दिनु न्यायोचित छैन् ।
जिउँदो हुँदासम्म सराप्ने र मरणोपरान्त सम्मान गरेर नेपाल रत्न भिडाउनु देहमुक्त आत्माप्रतिको घोर अपमान हो । ओलीले ५ सय ९४ लाई पदक थमाए । देउवा सरकारले दोब्बर फड्को मा¥यो तर औचित्य शून्य देखियो । पदक पाएर बधाई खानु भन्दा वहिष्कार गरेर स्यावासी पाउने समयको सुरुवात हुँदैछ ।
संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा राज्यको ढिकुटी दोहन हुँदा संविधान आफै अपमानित भएको छ । तजबिजी शैली र भागबन्डामा बाँडिएको विभूषण इतिहासकै महङ्गो भयो । महामारीका बेला २० करोडले एउटा सानो अस्पताल बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने अक्कल सरकारमा आउनु पथ्र्यो । २० करोडको अभावमा बुटबल धागो कारखाना बन्द छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन । जिउँदो हुँदासम्म सराप्ने र मरणोपरान्त सम्मान गरेर नेपाल रत्न भिडाउनु देहमुक्त आत्माप्रतिको घोर अपमान हो । ओलीले ५ सय ९४ लाई पदक थमाए । देउवा सरकारले दोब्बर फड्को मा¥यो तर औचित्य शून्य देखियो । पदक पाएर बधाई खानु भन्दा वहिष्कार गरेर स्यावासी पाउने समयको सुरुवात हुँदैछ । सरकारको छनौट सही छ भन्ने पुष्टी गर्ने ल्याकत सरकारसँगै नै छैन् ।
बद्नामीहरू समाजसेवाको बर्को आडेर आफूलाई चोख्याउन पदकका पछाडि लागेको छन् । ‘सस्तो बेसाहले पेट लाग्छ’ भन्ने ऊखानलाई मनन गर्नुपर्छ । आधारहिन मूल्याङ्कन र अपारदर्शी शैलीमा विभूषण वितरणको तुक छैन् । किसान मजुदुरलाई अपमान गर्ने पदक परम्पराको खारेजी समयको माग भइसकेको छ ।
लाजको पसारो कहाँसम्म देखिन्छ भने आफ्नो हातमा डाडुपन्यँु भएकाले आफैले आफैलाई सिफारिश गरेका छन् । पदक सिफारिस समितिका सदस्यहरूको सुझबुझमा त्रुटी देखिदाँ सरकारले आलोचना खेप्नु प¥यो । पदक पाउनुको मर्म गम्भीर छ । पेशागत वृत्तिविकासमा यसले अर्थ राख्छ । नम्बर र बढुवाका लागि लम्पसार पर्ने सनातान शैली हावी भएको छ । बद्नामीहरू समाजसेवाको बर्को आडेर आफूलाई चोख्याउन पदकका पछाडि लागेको छन् । ‘सस्तो बेसाहले पेट लाग्छ’ भन्ने ऊखानलाई मनन गर्नुपर्छ । आधारहिन मूल्याङ्कन र अपारदर्शी शैलीमा विभूषण वितरणको तुक छैन् । किसान मजुदुरलाई अपमान गर्ने पदक परम्पराको खारेजी समयको माग भइसकेको छ । वितरण गर्नै परे पनि विशिष्ट योगदानका आधारमा स्वतन्त्र छनौट समितिले सिफासि गर्ने प्रक्रियाको थालनी हुनुपर्छ ।
चोरी पैठारी गरी ल्याएको ६१ थान मोबाइल सहित २ जना पक्राउ